न बाँच्न सक्छु, न म’र्न सक्छु (भिडीयाेसहित) – Jagaran Nepal
न बाँच्न सक्छु, न म’र्न सक्छु (भिडीयाेसहित)
काठमाडौं । आफूले हाँक्दै आएको टेम्पो नजिकै पुगेपछि पार्वतीको बोली फुट्यो, ‘मेरा लागि यो हीरा हो । छोरीहरू जति प्यारा छन्, यो पनि उत्तिकै प्यारो छ ।’पार्वती श्रेष्ठ सीतापाइलाको टेम्पो ग्यारेजमा छिन् । २७ वटा टेम्पोको स्टेसन हो यो । बिहान झिसमिसेमै निस्कने टेम्पो झमक्क साँझ परेपछि मात्र यो स्टेसनमा आइपुग्थ्यो । रातभर चार्ज भएर बस्थ्यो । चैत ११ गते बिहानदेखि स्टेसनका यी टेम्पोहरू गेटबाहिर निस्किन पाएका छैनन् ।
एउटा कुनामा कालो नम्बर प्लेटको टेम्पो छ – बा १ ह ३८५८ ।तीन महिनायता नम्बर प्लेटसँगै पार्वतीको जीवन पनि धुमिलिएको छ । मैलिएको नम्बर प्लेट पुछ्दै गर्दा पार्वतीको तिख्खर स्वर सुनिन्छ, ‘बच्चाहरूले गर्दा म’र्न पनि सकिँदैन । बाँचौं ! बाँच्न धेरै गाह्रो भइसक्यो ।’
पार्वतीको आँसुले भरिएको जीवनमा खुसी फर्काउने यही टेम्पो हो । दुनियाँले साथ छोड्दा पार्वतीलाई सम्हाल्ने यही टेम्पो हो । अभावले किचेर चौबाटोमा लावारिस उभिएको जिन्दगीलाई बाटो देखाउने पनि यही टेम्पो हो । पार्वती थप खुल्छिन्, ‘मेरो सास नै यही टेम्पोमा अडेको छ ।’
लकडाउन सुरु भएपछि तीन महिनादेखि स्टेरिङको दर्शन गर्न नपाएको टेम्पोले पार्वतीलाई सपनामा आएर झस्काउँछ र निद्रा गायब गराइदिन्छ।०६४ साल । छोरी भर्खर दुई वर्ष पुगेकी थिइन् । तोते बोली बोल्न थालेकी थिइन् । कहिले बिस्कुट भन्थिन्, कहिले चक्लेट माग्थिन्, कहिले चाउचाउ भन्दै रुन्थिन् । छोरीलाई रिझाउनका लागि पार्वतीसँग बोली सिवाय केही थिएन ।
छन त पार्वतीका श्रीमान् पनि थिए । बिहेपछि दैलेखबाट काठमाडौं झरेका थिए, उनीहरू । रात परेपछि मात्र डेरा छिर्ने श्रीमान‍्को शरीर मदिराले लठि्ठएको हुन्थ्यो । पार्वतीका हातले जागिरे श्रीमान‍्को धन कहिल्यै समाउन पाएनन् । जहिल्यै निराश रहिरह्यो उनको मन ।सधैंको अभाव । सधैंको श्रीमान‍्को टोकसो । दिक्क थिइन् २२ वर्षीया पार्वती । यही दिक्क लाग्दो अवस्थालाई भुलाउन उनी गोठाटारमा टेप्पो चालकको तालिम लिन पुगिन् । आइडिया थियो भक्तपुरमा बस्ने उनकी दिदीको ।
दुई वर्षको बच्चालाई काखी च्यापेर उनी ड्राइभिङ सेन्टर पुग्ने गर्थिन् । बिहानको ११ देखि दिउँसोको तीन बजेसम्म तालिम चल्थ्यो । काखे छोरीकै लागि भए पनि टेम्पो चालकको लाइसेन्स हात पार्नु थियो । त्यही हुटहुटीले हुनुपर्छ पार्वतीले १५ दिनमै चालक अनुमति पत्र हात पारिन् ।बिस्तारै पार्वतीको दैनिकीमा परिवर्तन आयो । बिहानै चार बजे कोठाबाट निस्कने । ग्यारेजबाट टेम्पो झिकेर पालोमा बस्ने । दिनभर सीतापाइला, छाउनी, कालीमाटी त्रिपुरेश्वर र सुन्धाराहुँदै रत्नपार्कको रुटमा टेम्पो हाँक्ने । अनि साँझ आठ बजेतिर घर फर्किने ।
‘डेढ महिना साथीहरूसँग हिँडेर हात सफाइ गरेँ, बल्ल साहुको टेम्पो चलाउन थालें ।’ ‘बच्चाहरूले गर्दा मर्न पनि सकिँदैन । बाँचौं, बाँच्न धेरै गाह्रो भइसक्यो । आजभोलि त रातभर निद्रा नै पर्दैन । एक जार पानी किन्न पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो । उदास पार्वती विन्दास हुन थालिन् । दिनभर यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्‍याएबापत पाएको कमाइ सुत्ने बेला सिरानीमुनि राख्न पाउँदा उनी दङ्ग हुन्थिन् । यस्तो लाग्थ्यो, अँध्यारोमा रुमलिएको जीवनमा उत्साहका किरणहरू प्रवेश गरिरहेछन्।
पार्वतीका दिनहरू टेम्पोमा बित्न थालेपछि दुई वर्षकी छोरीलाई भक्तपुरकी दिदीले पढाउने जिम्मा लिइन् । यसले पार्वतीको काठमाडौंको कष्टप्रद जीवनलाई सहज केही सहज बनाइदियो । पार्वती भन्छिन्, ‘फलफूल, बिस्कुट र खेलौना लगेर हप्ता वा महिनाको एकपटक टेम्पो गुडाउँदै छोरीलाई भेट्न पुग्थेँ ।’पार्वतीले जुन पेसा अंगालिन्, त्यो उनको परिवारका लागि नितान्त नौलो थियो । एउटी महिलाको हातले टेम्पोको स्टेरिङ समाएको न परिवारलाई सैह्य भयो, न छिमेकीलाई । अरू त अरू, पार्वती आफ्नै श्रीमान‍्को समेत आँखाको कसिङ्गर बन्न पुगिन् ।
उनी दिनभर थाकेर डेरामा फर्क‌ंदा श्रीमान‍्को टोकेसो सहनुपर्थ्यो। श्रीमान‍्ले जहिल्यै एउटै कुरा दोहोर्‍याउँथे, ‘अब टेम्पो चलाउने काम छोड् ।’पार्वतीलाई फेरि पहिलेकै निरस जिन्दगीमा फर्कनु थिएन । उनी भन्छिन्, ‘श्रीमान् राम्रो भइदिएको भए, कमाएर दिने भए किन टेम्पो चलाउन पुग्थेँ र ! आफू त जसोतसो बाँच्थेँ, बच्चालाई चकलेट किन्ने पनि पैसा नभएपछि मैले के गरुँ ?’
जेठाजुबाट झन् द’बाबमा परिन् पार्वती । उनका परिवारले भन्थे, ‘टेम्पो त हामीले होइन, मगर र कामी दमाई‌ंले पो हो चलाउने हो त ।’आफ्नो पेसाप्रति यस्तो भन्दा पावर्तीलाई झन्का छुटेर आउँथ्यो । तर उनले चुपचाप टेम्पो चलाइरहिन् ।भर्खर-भर्खर खुत्रुकेमा पैसा जम्मा हुन थालेको थियो । दुई वर्षमा पार्वतीले पचास हजार रुपैयाँ बचत गरिन् । उनी आफ्नो जीवनमा फर्किएको खुसी गुमाउन चाहन्नथिन् ।
पार्वतीले आफ्नो खुट्टा राख्ने टेम्पोको ब्रेक साहुको नभएर आफ्नै होस् भनेर कल्पना गरेको धेरै भइसकेको थियो । यो कल्पना पूरा गर्नका लागि बचत भएको ५० हजारले आँट दियो ।दिदीले थप ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने बाचा गरिन् । पाँच लाख रुपैँया बैङ्कबाट ऋण निकालिन् । अर्को दुई लाख ऋण खोजिन् । अनि ८ लाख रुपैयाँमा आफ्नै टेम्पो बनाइन् पार्वतीले ।
आफ्नै ट्याम्पो हाँक्न थालेपछि पार्वतीको खुसीले सीमारेखा पार गर्‍यो । तर उनले सुविस्ताको सास फेर्न सकिनन् । ब्याट्री किन्नेदेखि टेम्पो मर्मत गर्नेसम्मको काममा उनी आफैँले खर्च गर्नुपर्ने भयो । पार्वती भन्छिन्, ‘झन् भड्खालोमा परेजस्तो पो भयो । महिनाको ५० हजार टेम्पोको किस्ता, त्यसमा ब्याट्रीको किस्ता पनि थपियो ।’तर १५ रुपैयाँको चटपटेले छाक टारेरै भए पनि पार्वतीले नियमित किस्ता बुझाउन भने छाडिनन् ।
छोरी छ वर्ष पुगिसकेकी थिइन् । उनी दिदीकोमा बसेर अध्ययन गर्ने भएकाले पार्वतीलाई केही सहज थियो । घरमा श्रीमान् भए पनि त्यसको अनुभूति गर्न सकेकी थिइनन् । ‘पाँच वर्ष पुगेदेखि छोरी आफैँ भेट्न आउन थालेकी थिई’, पार्वती सम्झन्छिन्, ‘उताबाट माइक्रोमा हालेपछि सुन्धारा आइपुग्थी। म त्यहीँ टेम्पोमा कुरेर बस्थेँ। छोरीसँग एकछिन भेटेर फेरि माइक्रोबसमै पठाइदिन्थेँ ।’ पार्वती यति व्यस्त थिइन् कि मात्र पाँच मिनेटको समय पनि उनलाई निकै मूल्यवान थियो ।
त्यहीबेला उनको पेटमा गर्भ बस्यो । तर गर्भ बसेका बेला पोसिलो खानुपर्छ, आराम गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यको यो नियम लागु गर्न असमर्थ थिइन् उनी । पेटमा बच्चा हुर्किँदै थियो । परिवारलाई गर्भको बच्चाको चिन्ता होइन कि टेम्पो चालकबाट हात धुनका लागि निरन्तर द’बाब थियो ।उनका जेठाजुले त्यतिबेलै भनेका थिए, ‘कि ट्याम्पो छोड, कि मेरो भाइलाई ।’
पार्वतीले दाह्रा किटेर जवाफ दिएकी थिइन्, ‘त्यसो भए म तिम्रो भाइ नै छोडिदिन्छु ।’ यसो भन्न उनलाई मन थिएन । तर उनी विवशतामा बाँधिएकी थिइन् । त्यतिबेला पार्वतीलाई लागेको थियो, यो संसारमा मेरो पर्वाह गर्ने कोही छैन ।बिहानै खाना पकाएर टिफिनमा हालेर निस्कनु र झमक्क साँझ परेपछि घर फर्किनु उनको दैनिकी थियो । दिनभर टेम्पोको गतिभन्दा दोब्बर गरी उनको मन दौडिरहेको हुन्थ्यो ।
पार्वती भन्छिन्, ‘गर्भवती भएको आठ महिनासम्म मैले टेम्पो हाँकिरहें ।’ आफ्नै सुत्केरी खर्च जुटाउका लागि पनि यसरी घोटिनुको विकल्प थिएन ।पार्वती गर्भवतीको अन्तिम क्षणमा नितान्त एक्लो अनुभव गरिरहेकी थिइन् । उनलाई सहयोग गर्नका लागि सात वर्षकी छोरी मात्र आइपुगेकी थिइन् । उनै छोरीको सहयोगमा पार्वतीले जन्म दिइन् – स्मृतिलाई ।
सुत्केरी भएर लडेकी पार्वतीलाई भेट्न दिदीबाहेक परिवारका कोही पुगेनन् । सकी नसकी खाना पकाउने, भाँडा माझ्नेदेखि कपडा धुनेसम्मको काम उनी आफैँले भ्याइन् ।स्मृति जन्मिएको तीन महिना हुन दुई बाँकी थियो । उनी छोरीसँगै टेम्पो लिएर फेरि उही रुटमा निस्किइन् । उनी सम्झन्छिन्, ‘जम्मा गरेका सबै सामान सकिसकेका थिए । घरमा खाने केही थिएन । टेम्पो नचलाए बाँच्नै नसक्ने अवस्था आयो ।’
बिहानै चार बजे उठ्थिन् । एकछिन पूजापाठमा बिताउँथिन् । आफूलाई खाना तयार पारेर टिफिनमा राख्थिन् । स्मृतिलाई न्यानो गरी कपडा लगाइदिन्थिन् । थर्मोसमा तातोपानी र झोलामा केही न्यानो कपडा अनि स्यार्लेक्स राखेर पौने पाँच बजे डेराबाट निस्कन्थिन् ।
ट्रिपमा लाग्नका लागि चाँडै पुग्नुपर्थ्यो। पालो आएपछि स्मृतिलाई एउटा हातले च्याप्थिन् र अर्को हातले स्टेरिङ समाउँथिन् । एउटा खुट्टामा स्मृतिलाई टेकाउँथिन् र अर्को खुट्टाले ब्रेक थिच्थिन् । छोरी निदाएपछि छेउको सिटमा सुताइदिन्थिन् । ‘एकातिर छोरीलाई सम्हाल्न अर्कोतर्फ ‘प्यासेन्जर’सँग डिल गर्न निकै सकस पर्थ्यो’, उनी ती दिनहरू सम्झन्छिन् ।
यसरी दिन बिताएर डेरा पुग्दा रातिको आठ बजिसकेको हुन्थ्यो । उनी भनिछन्, ‘अवस्था यस्तो थियो कि एक दिन टेम्पो नचलाए तरकारी र दूध किन्ने पैसासमेत हुँदैन्थ्यो ।’यसरी सानी छोरीसँग टेम्पो गुडाउँदा कतिले बिचरा ! भन्दै मुख चुक्चुकाउथे । कतिले ‘बाउ खै त ?’ भन्दै धारिलो प्रश्न तेर्स्याउँथे ।एकदिन एउटी प्यासेन्जरले यत्तिसम्म भनिन्, ‘दिदी, बरु एक बोरा चामल म किनिदिन्छु । यसरी हत्ते देखाउनुभन्दा घरमै बस्नुस् ।’
अहँ ! पार्वतीले चालकको सिट छाडिनन् । कहिले स्तनपान गराउँदै ट्याम्पो दौडाइन् । कहिले रुँदारुँदैकी छोरीलाई काखमा च्यापेर टेम्पो हाँकिन् । यसरी टेम्पो चलाएको देख्दा कति यात्रुले आत्तिँदै भन्थे, ‘बिस्तारै चलाउनु है दिदी, बरु ढिलो पुगे पनि केही हुँदैन ।’जसरी त्यसरी पार्वतीले टेम्पोमै हुर्काइन् स्मृतिलाई ।जब उनले कठिनाइसँग जुधेर दुई वर्ष पार गरिन्, पार्वतीले उनलाई छाउनीको एउटा मन्टेस्वरी स्कुलमा भर्ना गरिदिइन् । त्यसपछि भने उनले अलिकति भए पनि सुविस्ताको सास फेर्न पाइन् ।
पार्वती भन्छिन्, ‘बिहानै छोरीलाई लिएर टेम्पो चलाउन जान्थेँ । साढे आठ बजेतिर स्कुलमा छाडिदिन्थेँ । अनि फेरि साढे तीनबजे छोरीलाई लिएर ट्रिपमै जान्थेँ ।’यसरी नै आमाछोरीको दैनिकी चलिरहेको थियो । स्कुल भर्ना भएपछि छोरीका लागि खाना र खाजाको चिन्ता थिएन । तर एक दिन अकस्मात प्रिन्सिपलको फोन आयो ।
‘होइन, पैसा त तिरि नै रहेकी छु । के भएछ !’ पार्वती आत्तिँदै टेम्पोको गति बढाएर स्कुल पुगिन् ।प्रिन्सिपलले समस्या बताए । ‘तपाईंकी छोरी कति बजे उठ्छिन् ? दिनभर सुतेर अरूलाई पनि पढाउन गाह्रो भयो ।’पार्वतीको अनुहार मलिन बन्छ । उनी सुनाउँछिन्, ‘त्यसपछि भने घरबाट अलि ढिलो निस्कन थालेँ ।’
संघर्षको मैदानमै थिइन् पार्वती । दैनिकी उस्तै थियो । छोरीले खाजा खाने, कपाल कोर्नेदेखि होमवर्कसम्म टेम्पोमै गर्थिन् । कहिले पानी परेर लुछुप्पै हुन्थिन् । पानीले भिजेपछि रुँदै भन्थिन्, ‘ममी जाडो भयो छिटो घर जाऔं न !’ छोरीले त्यसोभन्दा आमालाई रुन मन लाग्थ्यो ।पार्वती र श्रीमान‍्को सम्बन्धमा झन् ठूलो दरार आयो । अब वचन मात्रै होइन, शरीरमाथि श्रीमान‍्को मुक्कासमेत बर्सिन थाल्यो ।
‘छ वर्षसम्म झेलेँ । तर अति भएपछि छोरी मान्छे हो, संघर्ष गरौंला । हातमा सिप छ, भए मिठो खाउँला, नभए चामल र नुन खाएर पनि छोराछोरी हुर्काउँला भनेर २०७१ सालमा डिभोर्स दिएँ’, पार्वतीले आफूभित्रको कठोरता छताछुल्ल पारिन् ।अब पार्वतीको अर्को नयाँ युगको सुरुवात भयो । भक्तपुर दिदीकहाँ भएकी जेठी छोरीलाई पनि आफूसँगै राखेर पढाउन थालिन् । टेम्पोको ऋण पनि तिरिन् । फेरि मेगा बैङ्कबाट ऋण निकालिन् । समूहमा पैसा जम्मा गर्न थालिन् । कुनै दबाब र प्रभावविना पार्वती आफ्नै दुनियाँमा स्वतन्त्र भएर उड्न थालिन् ।
उनी भन्छिन्, ‘पैसा त मैले कमाइनँ । तर त्यसपछि मेरो जीवन स्वर्गमा भएजस्तो लाग्यो ।’पार्वती जीवनको ठूलो जंघार तरेर एउटा सहज परिस्थितिमा आइपुगेकी थिइन् । अहिले उनीसँगै अघिपछि गरेकी छोरी तीन कक्षामा पुगिसकेकी छिन् । जेठी छोरी १० कक्षामा पुगिसकेकी छन् । पार्वती भन्छिन्, ‘सबै दुःख छोरीहरूका लागि नै गरेको हो । ऋण-धन जे भए पनि खानका लागि छोरीहरुलाई मारेकी थिइनँ ।’
उनलाई व्यवहार धान्न हम्मे-हम्मे नै थियो । मेघा बैङ्कमा ४५ हजार र सहकारीमा ४० हजार मासिक किस्ता बुझाउनुपर्ने । दुईवटा समूहमा छ/छ हजार रुपैयाँ । टेम्पोबाट मासिक एक लाखभन्दा बढी आम्दानी ।तर लकडाउनले टेम्पो ग्यारेजमै थन्किएपछि भने पार्वतीलाई फेरि उस्तै निराश बनाएको छ । उनी भन्छिन्, ‘अहिलेसम्म त जसो-तसो बाँचियो । अब त बाँच्नै गाह्रो छ ।’
लकडाउनका कारण पाँच लाख बढी ऋणमा परिसकेकी छन् । किस्ताका लागि बैङ्क र सहकारीबाट तारम्तार फोन आउँछ । पार्वतीले फर्काउने जवाफ नै भेट्टाउँदिनन् ।केही दिनअघि छोरीको स्कुलबाट किताब लिनका लागि फोन आयो । स्कुलले अनलाइन कक्षा सुरु गरेको थियो । स्कुल पुगेपछि शिक्षकले भने, ‘भर्ना गरेपछि मात्र किताब उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।’
जेठीका लागि २२ सय र कान्छीलाई १६ सय रुपैयाँ अब कहाँबाट ल्याउने ? पार्वती भन्छिन्, ‘बरु एक वर्षपछि पढ्लान भनेर किताब नै नलिई फर्किएँ ।’तीन महिना टेम्पो नचल्दा किस्ता तिर्न बाँकी ब्याट्री पनि बिगि्रसकेको छ । पावर्तीको जिन्दगी फेरि विषम परिस्थितिमाथि उभिएको छ ।ग्यारेजमा थन्किइएको बा १ ह ३८५८ टेम्पोतर्फ हेर्दै पार्वतीले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘आजभोलि त रातभर निद्रा नै पर्दैन । एक जार पानी किन्न पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो ।’भिडीयाे अनलाइनखबरबाट साभार